Ajumako-Enyan-Essiam(Ghana mmarahyɛbadwam mpesua) - Wikipedia
Ajumako-Enyan-Essiam(Ghana mmarahyɛbadwam mpesua)
Ajumako-Enyan-Essiam( pronunciation of"Ajumako-Enyan-Essiam") (help·info) yɛ mpesua baako a ɛwɔ Ghana mmarahyɛbedwam. Wɔyi mmarahyɛbedwanii baako a ne din wɔ abatoɔ nkrataa nom a ɔgyina hɔ ma saa mpesua no. Ajumako-Enyam-Essiam wɔ Ajumako/Enyam/Essiam mansini a ɛwɔ mfimfini mantam wɔ Ghana.
4 Beaɛ a menyaa mmoa firiiɛ.
Mpesua no hyɛ Ajumako/Enyam/Essiam a ɛwɔ mfimfini mantam wɔ Ghana.
Wɔ afe apem ahankron ne aduokron mmienu (1992) no Joseph Kwaku Enos a ɔwɔ kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress na ɔgyinaa hɔ maa mpesua no. New patriotic party anamusini Isaac Edousar Edumadze nso peree akonnwa no afe apem ahankron aduokron ne nsia (1996). Cassiel Ato Forson a ɔwɔ kyiniiɛ amanyɔkuo National Democratic Congress nso peree akonnwa no mfeɛ mpem mmienu ne nnwɔtwe (2008).
Wɔ mfeɛ mpem mmienu ne nnwɔtwe (2008) Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ wɔ Ajumako-Enyam-Essiam no, nnipa num na ɛperee mpesua no akonnwa no. Cassiel Ato Forson a ɔwɔ kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress nyaa mma mpem du nnwɔtwe, ahanum ne aduokron mmiɛnsa (18,593) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduonum baako akyirepɔ nson(51.7). William Kow Arthur-Baiden a ɔwɔ ɔsono amanyɔkuo New patriotic party nso nyaa mma mpem du num, ahannsia ne aduosia nnwɔtwe (15,668) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduanan mmiɛnsa akyirepɔ num(43.5). Mma apem ne aduanan (1,040) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu mmienu akyirepɔ nkron(2.9) na Alex Arthur a ɔnni amanyɔkuo biara nyaeɛ. Akokɔ amanyɔkuo convention people's party anamsini Rexford Mensah nso nyaa ahanan ne aduoson nkron (479) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu baako akyirepɔ mmiɛnsa (1.3). Evans Addo-Nkum a ɔwɔ Democratic freedom party nso nyaa ahanu ne du mmiɛnsa (213) a ɛyɛ akyirepɔ nsia(0.6).
Wɔ mfeɛ mpem mmienu ne nan (2004) mu wɔ Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ nom wɔ Ajumako-Enyam-Essiam no, nnipa nan na ɛperee mpesua no akonnwa no. Isaac Edousar Edumadze a ɔwɔ kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress nyaa mma mpem aduonu baako, ahanum ne aduasa nan(21,534) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduonum nson akyirepɔ nnwɔtwe (57.8). National Democratic Congress anamusini Samuel Aggrey Forson nso nyaa mma mpem du nan, ahanan ne aduoson nan(14,474) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduasa nnwɔtwe akyirepɔ nnwɔtwe (38.8). Mma apem, ahanu ne aduoson nsia(1,276) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu mmiɛnsa akyirepɔ nan(3.4) na Kwame Asoandze Edu-Ansah a ɔwɔ akokɔ amanyɔkuo convention people's party nyaeɛ. James Appiah-Mensah a ɔnni amanyɔkuo biara mu no nso anya mma biara.
Wɔ mfeɛ mpem mmienu ne nan (2004) wɔ Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ wɔ Ajumako-Enyam-Essiam no nnipa nsia na na wɔn din wɔ abatoɔ kɔmisa nkrataa nom. Isaac Edousar Edumadze a ɔwɔ ɔsono amanyɔkuo New patriotic party mu sane peree akonnwa no biom a ɔnyaa mpem du num, ahasa ne aduasa nsia(15,336) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduonum akyirepɔ mmiɛnsa (50.3). Mary Padmore Dadzie a ɔno nso wɔ Kyiniiɛ amanyɔkuo National Democratic Congress nso nyaa mma mpem du mmienu, ahannsia ne aduowɔtwe baako (12,681) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduanan baako akyirepɔ nsia (41.6). Mma apem,ahasa ne du nan(1,314) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu nan akyirepɔ mmiɛnsa (4.3) na Kwame Adomako-Mensah a ɔwɔ National Reform Party nyaeɛ. Akokɔ amanyɔkuo convention people's party anamsini Jonathan Suliman Otabil nso nyaa ahanson ne aduanan nson(747) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu mmienu akyirepɔ nan(2.4). Kojo Banafo a ɔwɔ united Ghana Movement nyaa ɔha ne du num(115) a ɛyɛ akyirepɔ nan(0.4). Robert Anthony Gyaisie a ɔwɔ People's National convention nso nyaa aduasa (30) a ɛyɛ akyirepɔ baako (0.1)
Wɔ afe apem ahankron ne aduokron nsia (1996) Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ nom no, nnipa nan na ɛperee mpesua no mmarahyɛbedwafoɔ akonnwa no. Isaac Edousar Edumadze a ɔwɔ ɔsono amanyɔkuo New patriotic party sane peree akonnwa no biom a ɔnyaa mpem du num, ahannsia ne aduosia (15, 660) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduanan nan akyirepɔ nnwɔtwe (44.8). Joseph Kweku Enos nso sane peree akonnwa no biom wɔ afe apem ahankron ne aduokron nsia (1996) mu a ɔnyaa mma mpem du nan, ahanum ne aduasa nkron (14,539) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu aduanan mmienu akyirepɔ nan(42.4). Mma mpem mmiɛnsa, ahannsia ne aduoson mmienu (3,672) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu du akyirepɔ num(10.5) na Lawrence Yaw Awuah a ɔwɔ People's Convention party nyaeɛ. People's National convention anamusini Joseph Mensah nso nyaa mma ahanson ne aduowɔtwe mmienu (782) a ɛyɛ ɔhamu nkyekyɛmu mmienu akyirepɔ mmienu (2.2)
Beaɛ a menyaa mmoa firiiɛ.[sesamu]
↑ 1996 Parliamentary Election Results, Electoral Commission of Ghana, Archivedfrom original on 17 Juy 2011
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajumako-Enyan-Essiam(Ghana_mmarahyɛbadwam_mpesua)&oldid=31026"
This page was last edited on 6 ɔpɛnimma 2021, at 17:37.